Kaban-qaadista Xafladda CannaTrade Jimcaha Julaay 2 • Dawooyinka Inc.eu
Munaasabadda CannaTrade ayaa bilaabmaysa Jimcaha 2da Luulyo
Daabacaadda 2aad ee Bandhigga CannaTrade wuxuu dhici doonaa laga bilaabo Luulyo 4-20. Iyada oo 20 istaag ah, dhamaan waxyaabihii muhiimka ahaa ee laga aasaasay barnaamijka caadiga ah ee CannaTrade: Aag ballaaran oo Chillout ah, Barta Hemp iyo dabcan muusig aad u wanaagsan. Sida caadiga ah, laakiin waxyar ka yar. cannabisgacaliye? Carwada kaalay.
Bishii Juun 23, Golaha Federaalka ee Switzerland ayaa ku dhawaaqay nasashada oo dhaqan geli doonta laga bilaabo berri. Munaasabadan ayaa ka dhici doonta banaanka iyadoo ururka loo oggol yahay inuu qaabilo 500 oo qof maalintii iyada oo aan la helin shahaadada 'Covid certificate' ama imtixaan la'aan. Maaskarada wajiga qasab ma aha. Bixinta faahfaahinta xiriirka sidoo kale qasab kuma aha booqdayaashuna ma aha inay fadhiistaan ​​markay wax cunayaan oo wax cabbayaan.
Abaabulka carwada ayaa u maleynaya in ilaa iyo hada dad aad u tiro yar laga talaalay kooxdeena bartilmaameedka ah sidaa darteedna aysan aheyn ikhtiyaar in lagu xaddido gelitaanka kaliya dadka haysta shahaadada 'Covid certificate'.
Waxa kale oo jira war wanaagsan oo loogu talagalay martida ka timid dibedda: Helitaanka Switzerland way fududaanaysaa. Markii aad ka soo galeyso Switzerland aagga Schengen, karantiil looma baahna oo baaritaanka ayaa kaliya qasab ku ah kuwa ku soo degaya hawada ee aan la tallaalin ama aan haysan wax caddeyn ah oo ka soo kabanaya cudurkii hore ee 'Covid'.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan 20years CannaTrade Festival waxaa laga heli karaa www.cannatrade.ch.
Waad ku kaxaysan kartaa si ammaan ah CBD (iyo THC 4 saacadood ka dib), ayaa lagu yidhi daraasad.
Baarayaasha waxay ogaadeen inaad si badbaado leh ugu kaxeyn kartid CBD iyo saameynta THC kadib ...
Kaabsoosha CBD: 5 sababood oo loo qaato CBD qaab kaabsal ah
Maanta, waxay umuuqataa saliida CBD inay kujirto wax walboo laga bilaabo calool-xumada ilaa serum wajiga. Iyo haddii cilmi baaristaada ...